Malunga Nathi-Zhucheng Jinlong Machine Manufacture Co., Ltd.
Intshayelelo yeNkampani kunye neMbali yethu
ZHUCHENG JINLONG MACHINE MANUFACTURE CO.LTD yinkampani yobuchwephesha obuphezulu bobuchwephesha bobunjineli obusekwe phantsi kokhokelo lwengqwalasela yamasebe ahlukeneyo kunye nemigaqo-nkqubo yohlengahlengiso ngokweemfuno zobume bophuhliso lweshishini lokhuseleko lokusingqongileyo laseTshayina. Inkampani yethu iseti yophando lwetekhnoloji yokusingqongileyo kunye nophuhliso, uphuhliso lwemveliso yokusingqongileyo, uyilo lobunjineli bokusingqongileyo, ulwakhiwo, ukusebenza kwezibonelelo zokusingqongileyo kunye nolawulo njengenye, ukusebenza kweshishini elizimeleyo leenzuzo ezibanzi kwezoqoqosho nezentlalo zenkampani.
I-ZHUCHENG JINLONG MACHINE MANUFACTURE CO.LTD lishishini lobugcisa obuphezulu elasekwa ngonyaka ka-1997 kwaye likhethekileyo kumatshini wokucofa kunye nokwenza iphepha kunye nezixhobo zokukhusela indalo. , Shandong, China.Imimandla yenkampani yi-37,000 ye-Square metres, iindawo zokusebenzela zi-22,000 square metres, kunye nenani labasebenzi abangama-165 kwaye ngaphakathi kwabo, inani leenjineli kunye namagcisa ngabantu abangama-56.Inkampani ineesethi ezingaphezu kwe-80 ze-welding kunye nezixhobo zokusika ze-hardware.Iimveliso zethu zithengiswe kakuhle kwaye zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-30, njengaseMelika, eCanada, eOstreliya, eMzantsi Korea, eRashiya, eMalaysia, eNicaragua, eMexico, eVietnam, eIndiya, eAlbania, eNorth Korea, eArgentina, eJordan, eSiriya. , iKenya, iNepal, iPakistan, iBangladesh, iSyria, iKenya njalo njalo kwaye yafumana iindumiso ezininzi kunye nodumo phesheya nasekhaya.Inkampani yethu “lishishini letyala le-AAA, ishishini lobuchwephesha obuphezulu, ishishini elithembekileyo, iyunithi eyanelisa abathengi be-Weifang, kunye nempucuko kunye nokunyaniseka kweshishini labucala.
Iqela elinamandla kunye nesebe lobugcisa & Kutheni usikhethe:
Inkampani yenza iiprojekthi ezahlukeneyo zokhuseleko lokusingqongileyo;Kumashishini okuvelisa izixhobo zasekhaya nezangaphandle, isikali semveliso, inqanaba lobugcisa, umgangatho wemveliso kunye nezinye izikhombisi eziphambili zihamba phambili kwishishini elifanayo.
Umda woshishino oluphambili: uyilo lobunjineli bokusingqongileyo, ikhontrakthi yobunjineli yokusingqongileyo kunye nokuthengwa kwezixhobo, uyilo lwemveliso yokusingqongileyo, ukwenziwa kunye nofakelo, ubuchwepheshe bokusingqongileyo kunye neprojekthi yobunjineli yeenkonzo zokubonisana nobugcisa, uphuhliso lobuchwephesha bobunjineli.
Inkampani inamandla obugcisa obuqinileyo, kunye nabasebenzi abangaphezu kwama-20 bezobuchwepheshe bokukhusela indalo kumanqanaba ahlukeneyo, abaphandi abangaphezu kwe-5 kunye neenjineli eziphezulu zomphandi, kunye nabasebenzi abangaphezu kwe-10 kunye nabasebenzi bezobugcisa kunye nezinye iziqinisekiso zemfundo kunye nezihloko zobugcisa. Ezi ngcali zisebenze nzima iminyaka emininzi kukhuseleko lokusingqongileyo lwasekhaya, ziqokelele amava asebenzayo atyebileyo, aqhelene nobuchwepheshe obutsha bokhuselo lokusingqongileyo ekhaya nakwamanye amazwe, kwaye baphuhlisa ubuchwephesha obutsha bokusingqongileyo kunye neemveliso.
Itekhnoloji engundoqo yenkampani ijikeleza i-granular sludge reactor (MQIC), I-Upflow anaerobic sludge blanket reactor (UASB), iStep feed Biological Nitrogen Removal Process (BRN), njl. Baye baqinisekiswa ngokupheleleyo ekusebenzeni kobunjineli, kwaye banenzuzo yokusebenza okuphezulu, i-carbon ephantsi, ukuveliswa kwezinto ezintsha kunye nobunkokeli kwinkalo yokukhusela indalo.
Ngokutsho kwemimandla eyahlukeneyo yokuvelisa, iinkqubo ezahlukeneyo zokuvelisa, umgangatho wamanzi amdaka, ubuninzi bamanzi kunye neemfuno ezahlukeneyo zokungcola, inkampani ikhetha inkqubo efanelekileyo yokudibanisa ukubonelela ngesisombululo esisiso kunye nenkxaso yobugcisa bokucocwa kwamanzi amdaka. Amandla ethu adibanisa ubulumko obubalaseleyo kunye namava atyebileyo omphathi weprojekthi, umphathi wesiza, injineli egunyazisiweyo kunye nomsebenzi ngamnye ukuba abe ziingcali zobunjineli ezibalaseleyo kwinkqubo, ulwakhiwo, ugunyaziso kunye nekontraka jikelele. Inkampani iseke igama elimangalisayo kwishishini.Kwilizwe lonke, umoya wokusungula izinto ezintsha kunye nobudlelwane obunemvisiswano kunye nabathengi, ababoneleli kunye namaqabane oshishino sisixhobo somlingo sempumelelo yethu.
ZHUCHENG JINLONG MACHINE MANUFACTURE CO.LTD ngokuhambelana ne "abantu-oriented, ezibophelele ekukhuselweni kwendalo, inzuzo yoluntu" ifilosofi ishishini, ukubonelela abasebenzisi ukusuka kuyilo, ukuvelisa, ufakelo, uvavanyo, inkxaso yobugcisa kunye neenkonzo kunye nezinye ngeenxa zonke, inkqubo yonke, iinkonzo zokulandelela.Jinlong uzimisele ukusebenzisana nabanini projekthi, amaziko ophando kunye nemibutho yoshishino, kwintsimi yokucoca amanzi amashishini, amanzi abuyiselwe ukusetyenziswa kwakhona kunye nezinye ubunjineli, kufuneka senze ubuvulindlela kunye nokuvuselela okuqhubekayo ukwenza igalelo elikhulu kuphuhliso lokhuseleko lokusingqongileyo e-China kwaye Umhlaba.